Quruxda Bar-baarinta Ubadka |
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 25, 2015
Ubadka waa quruxda lamaanahii isguursaday. Lamaano walbo wuxuu jecelyahay inuu arko ubadkiisa. Ubadka iyo xoolahuba waa qurux ka mid ah quruxda dunidda taallo. Ubad markii ay kuu dhashaan waxay kaaga baahanyihiin barbarin wanaagsan inaad ku barbaariso, sidda diin wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan. Ku dadaal inaad noqoto waalid jecel inuu ubadkiisa horumariyo adigoo la imanaayo ficilo wanaagsan.
Ubadka iyo waalidka waa inay leeyihiin xariir wanaagsan. Aabe iyo hooyo waxaa wanaagsan in waqtigooda waqti fiican ugu raadiyaan ubadkooda. Ubadkaada inaad la sheekeysato oo aad ka wareysato noloshiisa iyo waxa uu jecelyahay.
Mar marka qaar waxaa wanaagsan inaad ubadkaada u keento hadiyado uu jecelyahay ubadka. Caruurtaada ku dadaal inaad u muujiso kalkaceel wali adigoo u sheegaayo inaad jeceshahay. Waligaa ku dadaal inaad ubadkaada u muujiso jaceelka aad u qabto.
Haddii aad ubadka u muujiso oo aad u sheegto inaad jeceshahay wuxuu dareemayaa inuu yahay qof nasiib badan. Ubadkaada ku dadaal siddii aad ugulla sheekeysani laheed wuxuu jecelyahay inuu noqdo mustaqbalka. Kana fagaaw inaad adiga u doorto mustaqbalkiisa sidda, haddii ubadkaada jecelyahay inuu noqdo ganacsade ha u diidan oo ha dhihin tiktoor inaad noqoto Ayaan rabaa. Maxaa yeelay waxaa la ogaaday qofka aadanahay wuxuu asiga uu jecelyahay ayuu natiijo fiican ka gaaraa marwalbo.
Qofka markuu asiga shey doorto iyo markii loo dooro isku mid ma ahan, waxaana wanaagsan in ubadka maskaxdooda ka doortaan waxa ay jecelyihiin inay noqdaan mustaqbalka soo socda. Kuna dadaal inaad u ogalaato ubadkaada wuxuu asiga/iyada ay jeceshahay. Ubadka guusha nolosha uu ka leeyahay ma gaari karo illaa waalidka garab ku siiyo mooyee.
Marwalbo la soco cidda ay la saaxibayaan iyo cidda ay la socdaan ubadkaada. Saaxibka wanaagsan wuxuu ka faa’idayaa inuu ku dabadaydo oo isyiraahdo ninkaan la tartan oo inaad adiga ka wanaagsanaato iskuday ayuu is dhahayaa. Halkaasna waxaa ka imaani karo in wanaaga lagu tartamo. Haddii ubadkaada saaxib ka dhigto saaxib xun waxaaa macquul ah in sidaas oo kalle ubadka ka xumaado. Waa muhiim inaad la socoto nolosha ubadkaada halka ay marayso iyo halka ay usocoto. Waa inaad tahay waalid wax qiyaasi karaayo.
Bal illa daawo Muuqaalkaan quruxda badan ee laga sameeyay barbaarinta ubadka:
Next post Maxaad Ka Damacsantahay Noloshaada?
Previous post Dhaqaalaha Japan oo mar kale hoos u dhacay